AirTag inogona kugadziriswazve here? Ko kana ndikawana imwe kana kuda kuitengesa? | Ndinobva mac
Iyi kesi iri yemibvunzo yakati wandei iyo yese ine mhinduro imwechete, chinhu chekutanga kuita kudzoreredza AirTag kubvisa Apple ID yemuridzi ane kodzero. Pasina izvi enda kumberi kuti hazvibviri kushandisa chishandiso chinowanikwa mumugwagwa, chakatengeswa kana zvimwe zvakadaro.
Sezvo nezvimwe zvakasara zveApple zvigadzirwa kana isu tikawana imwe yeaya maAirTag pasi, bhegi, chikwama, makiyi ... uye hatidi kuidzosera kumuridzi wayo isu tichango gona kutora mukana webhatiri racho sezvo izvi zvishandiso zvine Apple ID yakabatana uye nekudaro pasina iyo hazvigoneke kuzvishandisa.
Apple inotaura zvakajeka mundima iyi:
AirTag inogona kusanganiswa neApple ID. Kana iwe uchida kushandisa AirTag yakashandiswa nemumwe munhu, tanga wabvisa AirTag kubva kuApp ID yako. Kana mushandisi wekare akabvisa AirTag kubva kuApp ID yavo, asi yanga iri kunze kweye AirTag's Bluetooth renji, unofanirwa kuiseta usati waishandisa nemidziyo yako.
Izvo zviri kutaurwa iwe unogona sei kumisazve iyo AirTag
Kunge mamwe maApple zvishandiso Aya maAirTag anogona zvakare kugadzirisazve kana kumisazve, pane izvi iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Dhinda pasi pabutiro resimbi yesimbi isina chinhu
Bvisa chivharo nebhatiri, wozoisa bhatiri uye vhara kumashure
Dhinda pasi pabhateri kusvikira iwe unonzwa beep
Kana ruzha rwapera dzokorora maitiro acho kana kaXNUMX: bvisa uye kutsiva bhatiri, wobva wadzvanya pasi pabhatiri kusvikira iwe wanzwa beep. Iwe unofanirwa kunzwa ruzha nguva dzese paunodzvanya bhatiri, kune huwandu hwenzwi shanu
Tsiva chivharo nekumiririra iwo matatu tebhu pachivharo nematatu akadzika paAirTag
Dhinda pasi pachivharo kusvikira iwe wanzwa ruzha
Chinja chivharo chirimowoko kusvika chamira kutendeuka
Nenzira iyi iwe watodzorera kana kuseta iyo AirTag asi rangarira izvo Kana ichifambidzana neApple ID, unofanirwa kutanga wasunungura iyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » AirTag inogona kugadziriswazve here? Ko kana ndikawana imwe kana kuda kuitengesa?